Ny tadin'ny sensor ho an'ny Apple Watch dia mety ho tonga amin'ny 2016 | Vaovao IPhone
Araka ny tsaho farany, Apple dia mety efa miasa amin'ny tadiny izay manana sensor manana azy manokana ary manampy asa vaovao ao amin'ny Apple Watch. Ary koa tsy hiresaka momba ny tetik'asa maharitra iray isika, na dia amin'ny fotoana antonony aza, satria ireo tsaho ireo ihany dia manondro ny fiandohan'ny taona 2016 toy ny fotoana mety hahavoa ny tsena ny kojakoja voalohany an'ity karazana ity.
Fandrefesana ny saturation oxygen, ny hafanan'ny vatana, ny tosidra, na koa ny tahan'ny taovam-pisefoana Mety ho azo atao izany amin'ny Apple Watch afaka volana vitsivitsy noho ireo fehin-kibo vaovao ireo, izay hifandray amin'ny famantaranandro amin'ny alàlan'io seranana miafina io izay ao anatin'ny iray amin'ireo elatra hampidirana ilay tadiny. Io seranana io, afaka mamindra angona ary koa mamatra ny fitaovana, dia natokana hampiasain'ny serivisy teknikan'i Apple, ary manompo, ohatra, hamerenana amin'ny laoniny ny Apple Watch raha toa ka tsy azo atao ny mampifandray azy amin'ny iPhone-nao. Mety ho ilay hoe raha afaka mampifandray ilay tadiny amin'ny famantaranandronao ianao dia tsy maintsy mandeha amin'ny serivisy ara-teknika nahazo alalana, satria hoy izahay milaza fa miafina ny seranana.
Tsy mampidi-doza mihitsy ny hevitr'ireo fehy ireo. Amin'ny lafiny iray, mamela ny fampidirana sensor vaovao izay mety ho sarotra ny miditra amin'ny habaka kely toy ny boaty Apple Watch, na izay tsy afaka miasa akory. Sarotra ny manana sensor amin'ny mari-pana amin'ny vatana amin'ny famantaranandro satria ny fitaovana mihitsy no manome hafanana ary tsy azo atokisana ny sanda refesina, na izany aza apetraka amin'ny lafiny mifanohitra, toy ny fehin-kibo, dia mety kokoa . Fa ankoatran'ireny lafiny teknika ireny dia mety ho fomba iray ihany koa ampio fiasa vaovao amin'ny famantaranandro fa tsy mila mividy famantaranandro vaovao.
Satria tsy mahita fitaovana iray izahay mamela ny teknolojia hiditra amin'ny lamaody sy rendrarendra, ary ao anatin'ireto sehatra ireto dia mila manana fiainana antonony mihoatra ny herintaona ny vokatra. Ny finday dia mety ho vokatra mandritra ny volana vitsivitsy na herintaona, fa ny famantaranandro dia zavatra tokony haharitra kokoa noho io fotoana io, ary indrindra raha miresaka momba ireo maodely lafo vidy sy lafo vidy indrindra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny tadin'ny sensor ho an'ny Apple Watch dia mety ho tonga amin'ny 2016
Pangu dia efa vonona ny Jailbreak ho an'ny iOS 8.4.1